Dr. Tint Swe's Writings: Blood Pressure သွေးဖိအားအကြောင်း
တခုလောက်မေးပါရစေဆရာ။ အပေါ်သွေး၊ အောက်သွေးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။ ကျနော် ဉာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားကြည့်တာ အပေါ်သွေးဆိုတာ နှလုံးက pumping လုပ်လိုက်လို့ pressurized ဖြစ်သွားတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောထဲက သွေးရဲ့ pressure နဲ့ အောက်သွေးဆိုတာ နှလုံးထဲကိုပြန်လာတဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲမှာရှိတဲ့ သွေးရဲ့ pressure ကို ပြောတာလား ဆရာ။ အချိန်ရရင် ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဆရာ။
သွေးတိုးအကြောင်းမေးသူတွေ၊ သွေးဖိအားနည်းလို့မေးသူတွေ သွေးပေါင်ချိန်လို့ရေးတာ မမှန်ပါ။ သွေးဖိအားလို့ရေးရမယ်။ ဘီပီ လို့လည်းရေးနိုင်တယ်။ သွေးဖိအားကိုပြောတိုင်း အထက်ဂဏန်းနဲ့ အောက်ဂဏန်ဆိုပြီး ၂ ခုလုံးပြောရမယ်။
အသက် ၅၅ နှစ်ထက်ငယ်သူတွေထဲမှာ ယောက်ျားတွေကပိုပြီး သွေးဖိအားများတာတွေ့ရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးဆုံးပြီးနောက် တက်လာတာတွေ့ရတယ်။ သွေးတိုးကြောင့် ဆက်ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါရသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးဦးရေက ပိုနည်းတာတွေ့ရတယ်။ အဲလိုကွာခြားမှုတွေရှိပေမယ့် သွေးတိုးကို ကာကွယ်မှုနဲ့ ကုသနည်းတွေမှာ ယောက်ျားမိန်းမကွာခြားမှုမရှိပါ။ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ အသက် ၅ဝ ကျော်သူတွေမှာ ပုံမှန်သွေးဖိအားရဲ့ သွေးဖိအား ဂဏန်းနှစ်မျိုးမှာ Systolic ခေါ် အထက်ဂဏန်းများခြင်းကနေ နှလုံးရောဂါကိုရစေတယ်။ အထက်သွေးဖိအားလာရင် သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေရဲ့နံရံတွေတင်းမာလာစေတယ်။ Plaque ခေါ် အပြားလွှာ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ အဲတာကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အရပ်ရှည်သူတွေမှာ သွေးဖိအားပိုမြင့်ကြတယ်။ သွေးတိုးဟာ မိသားစုအလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
နှလုံးခုန်နှုန်းများလာရင် ကိုယ်ထဲကိုသွေးပိုပြီးစီးလျှောက်စေတယ်။ ဒါပေမယ့်သွေးတိုးပိုဖြစ်စေတာတော မတွေ့ရပါ။ သွေးကြောလေးတွေက အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
သွေးဖိအားတိုင်းတယ်ဆိုတာ သွေးလွှတ်ကြောနံရံပေါ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့ထိအားကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ ဂဏန်း ၂ မျိုး ဖတ်ရတယ်။ ဥပမာ 120/80 mmHg ဖြစ်တယ်။ သွေးတိုးရှိတယ်လို့ပြောဘို့ရာ အဲဒီဂဏန်းတခုခုဟာ ပုံမှန်ထက် ကျော်တာကို ခေါ်တယ်။
Systolic Pressure ဆစ်စတိုးလစ် ခေါ် အထက်ဂဏန်းဆိုတာ နှလုံးညှစ်လိုက်စဉ်မှာ သွေးလွှတ်ကြောလေးနံ့ရံပေါ် သက်ရောက်လာတဲ့ ဖိအားဖြစ်တယ်။ Diastolic Pressure ဒိုင်ယာစတိုးလစ် ခေါ် အောက်ဂဏန်းဆိုတာ နှလုံးခုန်တာ တခါနဲ့တခါကြားမှာ သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေနံ့ရံပေါ်သက်ရောက်လာတဲ့ ဖိအားဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်သွေးဖိအားဆိုတာ အထက်ဂဏန်း 110 ကနေ 134 အထိနဲ့ အောက်ဂဏန်း 75 ကနေ 87 အထိရှိတာကိုခေါ်တယ်။ အသက်အရ ကွဲပြားတယ်။
သွေးဖိအား ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင် ဘယ်လိုထိန်းမလဲ
လတ်ဆတ်တဲ့အသီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ဖွေးဖြူသွားအောင်ချွတ်မထာထားတဲ့အစေ့အဆံ (ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး၊ဘာလီ၊ အုတ်စပါး) တွေ၊ နတ် ခေါ် အစေ့အဆံ (သစ်ကြားသီး၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ဗာဒံစေ့) တွေ၊ ငါး၊ ပဲသီးအမျိုးမျိုး စားသင့်တယ်။ ထရန့်စ်ဖက် ခေါ် ပြန်ကြော်ဆီ၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ သိုးသား၊ နည်းသင့် ရှောင်သင့်တယ်။ သကြား နည်းသင့်တယ်။ ပြည့်ဝဆီမတည့်ပါ။
တနေ့မှာ ဆား (ဆိုဒီယမ်ဓါတ်) 1,500 mg ထက်မပိုသင့်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဝက်ထက် မပိုသင့်။
၃။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချပါ၊ ထိန်းပါ။ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါ။ အရက်မသင့်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
(က) Prehypertension သွေးတိုးရှိတော့မယ်ဆိုတာ အထက်ဂဏန်း 130 ကနေ 146 အထိနဲ့ အောက်ဂဏန်း 85 ကနေ 91 အထိရှိတာကိုခေါ်တယ်။
(ခ) Stage 1 Hypertension သွေးတိုး အဆင့် (၁)
အထက်ဂဏန်း 140 ကနေ 153 အထိနဲ့ အောက်ဂဏန်း 90 ကနေ 96 အထိကိုခေါ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများခြင်းနဲ့ အစားအသောက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်လို့ဖြစ်တယ်။ ကုသမှုစရတော့မယ်။ အထက်မှာရေးပြထားတဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ လူနေမှုပုံစံပြင်ဘို့လိုလာပြီ။
(ဂ) Stage2Hypertension သွေးတိုး အဆင့် (၂)
အထက်ဂဏန်း 160 နဲ့ အောက်ဂဏန်း 100 အထက်ရှိတာကိုခေါ်တယ်။ ချက်ချင်းကုသမှုလိုတယ်။
သွေးတိုး အဆင့် (၁) မှာ သွေးတိုးရောဂါလက္ခဏာတွေ မခံစားရလောက်သေးပါ။ (၂)ရောက်ရင် ဒါတွေခံစားရနိုင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်၊ နှာခေါင်းသွေးယို၊ အသက်ရှူမဝ။ အဲလိုလက္ခဏာတွေ မခံစားရပေမယ့် သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေ ထိခိုက် ပျက်စီးလာနေပြီ။ heart disease နှလုံးရောဂါ၊ heart attack နှလုံးအတက်နဲ့ stroke ဆထုပ် ခေါ် လေဖြတ်တာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပြီ။
အများအားဖြင့် ဘာလို့သွေးတိုးသလဲ ရှာမတွေ့ပါ။ အသက်ရလာတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွေးကြာလေးတွေမှာ အဆီဓါတ်တွေလာစုနေမယ်။ အထက်မှာရေးထားတဲ့ မှားယွင်းတဲ့လူနေမှုပုံစံကြောင့် အသက်အရဖြစ်တာထက်ပိုတဲံ မကောင်းကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာစေတယ်။ လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ sleep apnea ခေါ် အိပ်ရေးမဝခြင်းတွေကနေ ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။ တချို့ဆေးတွေကနေလည်းဆိုးစေနိုင်တယ်။ ဥပမာ အအေးမိအတွက် သောက်ဆေးတွေနဲ့ အနာအကိုက်က်သာဆေးတွေ။
အသက်ဘယ်အရွယ်မှာ သွေးတိုးဖြစ်ဖြစ် ကုသရတာ အတူတူဖြစ်တယ်။ သွေးဖိအားများလွန်းသူတွေကို ကုသရာမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရတယ်။
ကိုယ်ပိုင်သွေးဖိအားတိုင်းနေပါ။ လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ sleep apnea ခေါ် အိပ်ရေးမဝခြင်းတွေရှိရင် ကုသပါ။ ဆရာဝန်ကိုပုံမှန်ပြသနေပါ။ သွေးကျဆေးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသောက်နေပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်သာ စားသောက်ပါ။ ဆား၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ထရန့်စ်ဖက်တွေ ရှောင်ပါ။ ပိုဆက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ အာလူး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ကန်စွန်းဥ၊ အစိမ်းရင့်ရောက်အရွက်တွေစားပေးပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချပါ။ ထိန်းပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနည်းရွေးလုပ်ပါ။ တရားထိုင်နည်း၊ ရောဂနည်း၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း၊ အေရိုးဗစ်၊ သင့်တော်တဲ့အားကစားနည်း။ သွေးတိုးကျဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သောက်နေပါ။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေကြောင့် ဆေးပြောင်းဘို့လိုရင် ဆရာဝန်ပြောပါ။
သွေးတိုးကိုကုသနေရင်း Hypotension သွေးဖိအားနည်းတာကိုလည်းသိထားပါ။ အထက်ဂဏန်း 90 နဲ့ အောက်ဂဏန်း 60 ထက်မနည်းသင့်ပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလဲ။ Anaphylaxis ရှော့ခ်ရခြင်း၊ သွေးယို၊ သွေးသွန်ခြင်း၊ ရေဓါတ်ဆား ဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါတခုခုဖြစ်ခြင်း၊ သကြားဓါတ်နည်းသွားခြင်း။ diuretics ခေါ် ဆီးသွားစေတဲ့ ဆေးတွေ၊ alpha blockers, beta blockers သွေးကျဆေးတွေ။ တချို့စိတ်ကျရောဂါဆေးတွေ။ ပန်းသေပန်းညှိုး ဆေးတွေကနေလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဗီတာမင်ဘီ-၁၂ နဲ့ ဖေါလစ်အက်စစ် နည်းရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါတွေကနေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
သွေးဖိအားနည်းရင် ဒါတွေခံစားရနိုင်တယ်။ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ ခေါင်းမူး၊ မောပန်း၊ ခေါင်းထဲပေါ့နေ၊ ပျို့၊ သတိလစ်ချင်။ သတိလစ်။ Shock ဖြစ်ရင် လက်ကောက်ဝတ်သွေးခုန်တာ စမ်းရခက်မယ်။ စမ်းမရဖြစ်မယ်။ နှလုံးခုန်တာမြန်မယ်။ ကိုယ်ကအေးစက်လာမယ်။ စိတ်မကြည်လင်ဖြစ်မယ်။ အသက်ရှူတာတိမ်ပြီးနှေးမယ်။ အဲလိုဖြစ်သူကို ရေ-အရည် များများတိုက်ရမယ်။ သွင်းပေးရမယ်။ သင့်တော်တဲ့အစားအသောက်စားစေရမယ်။ အဲလိုအချိန်မှာ ဆားလိုမယ်။
1. Bathing and Blood Pressure သွေးတိုး နဲ့ ရေချိုးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/bathing-and-blood-pressure.html
2. Blood Pressure သွေးဖိအားအကြောင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blood-pressure.html
3. Cardivas သွေးတိုးကျဆေး
4. Digital blood pressure monitors သွေးဖိအားတိုင်းကရိယာ ကန်တော့ချင်လို့ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/digital-blood-pressure-monitors.html
5. High blood pressure သွေးတိုးအမေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/high-blood-pressure-question.html
6. Home Blood Pressure Monitors သွေးဖိအားတိုင်းကရိယာတွေ မမှန်တတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/home-blood-pressure-monitors.html
7. Hypertension (1) သွေးတိုးရောဂါ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hypertension-1.html
8. Hypertension (2) သွေးတိုးရောဂါ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hypertension-2.html
9. Hypertension Question သွေးတိုးမေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/high-blood-pressure.html
10. Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ischemic-heart-disease.html
11. Medicines for High Blood Pressure သွေးတိုးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/medicines-for-high-blood-pressure.html
12. Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/stroke-emergency-treatment.html
13. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/stroke.html
14. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆဖြစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stroke_22.html
15. Stroke လေဖြတ်ရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/stroke.html